Luka 5 - Nkwa Asem (NA-TWI) | Biblica
Luka 5 - Nkwa Asem (NA-TWI)
Asuafo no frɛ
1Da bi a Yesu reka asɛmpa wɔ Genesaret tare ho no, nnipakuw bɛkyeree ne so sɛ wɔrebetie Onyankopɔn asɛm. 2 Ohuu akorow abien a apofofo bi a wɔrehohoro wɔn asau wɔ mu no agyaw wɔ ɔtare no ho. 3 Yesu kɔtenaa ɔkorow no baako a na ɛyɛ Simon de no mu. Ɔka kyerɛɛ Simon se ompia nkɔ nsu no mu kakra sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi afi hɔ akasa akyerɛ nnipa no.
4 Yesu wiee n’asɛnka no, ɔka kyerɛɛ Simon se, “Hare kɔ baabi a emu dɔ kakra na munkogu mo asau no na mubeyi nam bebree.” 5 Simon kae se, “Owura, yɛyɛɛ adwuma anadwo mu no nyinaa yɛannya hwee, nanso w’asɛm nti, yebegu yɛn asau no.”
6 Woguu asau no na woyii nam bebree maa anka mpo asau no retetew. 7 Wɔfrɛɛ wɔn mfɛfo a wɔwɔ ɔkorow baako no mu no ma wɔbɛboaa wɔn twee asau no. Nam no yɛɛ akorow abien no nyinaa ma ma a anka ɛreyɛ amemem mpo.
8 Simon Petro huu nea aba no, obuu Yesu nkotodwe kae se, “Me wura, mesrɛ wo, fi me nkyɛn kɔ na meyɛ ɔdebɔneyɛfo a mensɛ sɛ wobɛn me.” 9 Nam dodow a woyii no yɛɛ Petro ne n’ahokafo no nwonwa. 10 Saa ara nso na ɛyɛɛ Yakobo ne Yohane, Sebedeo mma no nso nwonwa. Yesu ka kyerɛɛ Petro se, “Nsuro, efi nnɛ, wobɛyɛ nnipa yifo.”
11 Wɔde akorow no beduu nsu no ano hɔ no, wogyaw wɔn nneɛma nyinaa hɔ bedii n’akyi.
Ɔkwatani bi ayaresa
12 Da bi a Yesu wɔ kurow bi mu no, ɔbarima bi a kwata ayɛ ne honam nyinaa bɛkotow n’anim srɛɛ no se, “Owura, mesrɛ wo, sɛ ɛyɛ wo pɛ a, sa me yare.”
13 Ɛhɔ ara Yesu teɛɛ ne nsa de kaa no kae se, “Yiw, ɛyɛ me pɛ. Wo ho mfi.” Amonom hɔ ara, ne ho fii. 14 Yesu hyɛɛ no se, “Wo ne obiara nni w’ayaresa yi ho nkɔmmɔ. Kɔ na fa wo ho kɔkyerɛ ɔsɔfo na bɔ afɔre a Mose hyɛɛ sɛ akwatafo a wɔn ho afi no mmɔ sɛ adansedi no.” 15 Yesu anwonwadwuma a ɔyɛe yi maa ne ho asɛm trɛwee mpɔtam hɔ nyinaa maa nnipa bebree betiee no pɛe sɛ ɔsa wɔn yare nso. 16 Nanso na ɔtaa twe ne ho kɔ sare so kɔbɔ mpae.
17 Bere bi a Yesu rekyerɛkyerɛ no, na Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo bi a wofi Galilea ne Yudea nkurow ahorow so ne Yerusalem nso wɔ hɔ bi a wɔretie no. Saa bere no, na Onyankopɔn ayaresa tumi ahyɛ no ma.
18 Mmarima bi baa hɔ a wɔso obubuafo bi. 19 Esiane sɛ na wontumi mfa nnipakuw no mu nkɔ Yesu nkyɛn nti, wɔforoo ɔdan a Yesu wɔ mu no kotuu atifi tokuru, de obubuafo a ɔda ne kɛtɛ so no faa mu gyaagyaa no brɛoo, kɔtoo Yesu anim.
20 Yesu huu gyidi a wɔwɔ no, ɔka kyerɛɛ ɔyarefo no se, “Onua, wɔde wo bɔne akyɛ wo.”
21 Farisifo no ne mmara no akyerɛkyerɛfo no tee asɛm a Yesu kae no, wobisabisaa wɔn ho wɔn ho se, “Hena ne saa onipa yi a ɔreka abususɛm yi? Hena na otumi sɛ ɔde bɔne kyɛ ka Onyankopɔn ho?”
22 Esiane sɛ Yesu huu nea wodwinnwen nti, obuaa wɔn se, “Adɛn nti na mudwen sɛ asɛm a mekae yi yɛ abususɛm?” 23 Yesu bisaa wɔn se, “Nea ɛwɔ he na ɛyɛ den, sɛ wɔbɛka akyerɛ obi se, wɔde wo bɔne akyɛ wo anaasɛ, wɔbɛka se, sɔre na nantew?” 24 Na sɛ ɛbɛyɛ na mubehu sɛ Onipa Ba no wɔ tumi sɛ ɔde bɔne kyɛ wɔ asase so nti, mereka akyerɛ wo se, “Sɔre yi wo kɛtɛ na kɔ fie!”
25 Amonom hɔ ara, ɔsɔree, yii ne kɛtɛ, kɔɔ fie. Ɔrekɔ no nyinaa na ɔreyi Onyankopɔn ayɛ. 26 Wɔn a wogyina hɔ no ho dwiriw wɔn. Ehu kaa wɔn. Woyii Onyankopɔn ayɛ kae se, “Ɛnnɛ de, yɛahu anwonwade.”
Yesu frɛ Lewi
27 Eyi akyi no, Yesu fii hɔ kohuu ɔtowgyeni Lewi sɛ ɔte atowgyei. Ohuu no no, ɔka kyerɛɛ no se, “Bedi m’akyi.” 28 Ɛhɔ ara, Lewi sɔre, gyaw ne nneɛma nyinaa hɔ dii n’akyi.
29 Akyiri yi, Lewi tow pon wɔ ne fi maa Yesu. Towgyefo ne nnipa ahorow bebree kɔɔ apontow no ase.
30 Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo no hui sɛ Yesu ne saa nnipa no ato nsa redidi no, wonwiinwii bisaa no se, “Adɛn nti na wo ne towgyefo ne nnebɔneyɛfo ato nsa redidi?”
31 Yesu buaa wɔn se, “Wɔn a wɔyare no na ɔyaresafo ho hia wɔn na ɛnyɛ wɔn a wɔnyare. 32 Mamma sɛ merebɛfrɛ atreneefo na mmom mebɛfrɛɛ nnebɔneyɛfo sɛ wɔnsakra wɔn adwene.”
33 Nnipa no kɔɔ so bisaa no bio se, “Adɛn nti na Yohane Osuboni asuafo ne Farisifo asuafo no de wɔtaa di mmuada, na w’asuafo de daa wodidi na wɔnom?”
34 Yesu nso bisaa wɔn se, “Ɛho hia sɛ wɔn a wɔn ani agye, anaasɛ wɔn a wɔahyia wɔn ayeforo ase no di mmuada, wɔ bere a ayeforo kunu no wɔ wɔn nkyɛn anaa? 35 Nanso da bi bɛba a wɔbɛfa ayeforokunu no afi wɔn nkyɛn, saa bere no na wobedi mmuada.”
36 Yesu buu wɔn bɛ yi se, “Obi mfa ntama foforo ntare ntama dedaw mu. Ɔyɛ saa a foforo no bɛma dedaw no asuane. Afei ɛbɛma nsonoe ada foforo no ne dedaw no ntam. 37 Obiara nso mfa nsa foforo ngu mmoa nhoma nsa nkotoku dedaw mu. Ɔyɛ saa a nsa no bɛpaapae nkotoku no na ahwie agu na nkotoku no nso asɛe.
38 Eyi nti, nsa nkotoku afoforo mu nko ara na ɛsɛ sɛ wɔde nsa foforo gugu. 39 Obi nnom mmarimasa nwie mmisa ntinkum ase. Nea ɔnom no ka se, nea apae no na eye.”
NA-TWI : Luka 5